"(Hoy Kristy:) Aza matahotra; Izaho no Voalohany sy Farany, dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay." Apokalypsy 1:17,18
"Mahavonjy tokoa izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy." Hebreo 7:25
-Tamin’ianao nanaiky an’i Kristy, iza no Jesosy ninoanao?
Sadaikatra i Yvan, nijery ahy:
-Inona no tianao holazaina?
-Ny tao an-tsainao ve dia lehilahy mendri-kaja, antsoina hoe Jesosy avy any Nazareta, velona 2000 arivo taona lasa izay, tany Israely? Ilay olona voalazan’ny tantara fa nanao fahagagana, nampahiratra ny jamba ary nampahalady ny marenina? Ilay lehilahy nampianatra antsika hifankatia, ary tamin’ny farany dia maty teo amin’ny hazofijaliana? Izany hoe: ny nekenao ve dia Jesosy «olona», sa Jesosy Kristy Andriamanitra, Izay tonga olombelona ary nitsangana tamin’ny maty? Jesosy Kristy, Ilay Tompo, ary velona ankehitriny?
Nidiridiry ny mason’i Yvan, ary avy eo toa mba nisy tara-pahazavana kely. Hoy izy tamiko:
- Ilay Jesosy olona, velona 2000 taona lasa izay, no noraisiko.
- Ka izao àry, ry Yvan, no fanontaniana mipetraka: Tianao ve, izao ankehitriny izao, ny hitoky tanteraka amin’i Jesosy, Ilay Jesosy Izay Andriamanitra? Tsy hoe manaiky fotsiny fa nisy lehilahy iray tsara fanahy, nandehandeha tet? an-tany ka ezahinao alain-tahaka, fa manaiky Azy ho Tompo, Andriamanitra, velona ankehitriny, ary te ho velona ao anatinao. Sitrakao ve, ry Yvan, ny hiara-mandohalika amiko izao, ka hanaiky io Kristy velona io, Ilay mahay manova ny fiainanao avy ao anatiny?
Teo no ho eo ihany dia namaly i Yvan hoe «eny». Niara-nandohalika izahay ary … nanolo-tena ho an’Ilay Kristy velona izy. Yvan vaovao no teo anoloako.
araka an’i Bob George